Rooble oo lagu wado inuu markale maanta kulan gaar ah la qaato xubnaha midowga musharraxiinta | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Rooble oo lagu wado inuu markale maanta kulan gaar ah la qaato...
Rooble oo lagu wado inuu markale maanta kulan gaar ah la qaato xubnaha midowga musharraxiinta
Wararka ka imanaya Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble lagu wado in uu maanta Mar kale la kulmo xubnaha midowga musharraxiinta mucaaradka ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya in Kulankan Diirada lagu saaro doono xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan sii amba qaadida wada-hadallada xukuumadda iyo mucaaradka oo 25-kii bishan heshiis horudhac ah ku gaaray hotelka Decale ee garoonka Aadan Cadde.
Sidoo kale wararka aya sheegaya in ay si gaar ah labada dhinac uga arrinsanayaan sidii loo dhameyn lahaa khilaafka xoogan ee weli ka taagan doorashada 2021-ka, gaar ahaan sidii ay iskaashi uga yeelan lahaa arrintaasi.
Sidoo kale xukuumadda & musharraxiinta ayaa isla soo qaadaya arrimo ay ka mid yihiin banaan-baxa ay abaabulayaan mucaaradka oo lagu ballamay in la qabto 10 cisho gudahood, iyada oo sidoo kale lagu soo bandhigayo kulankan xogta ay uruuriyeen xubnaha guddiga wadajirka ah ee loo xilsaaray dhacadaadi 19-kii Febaraayo , 2021-ka.
Previous articleMaraykanka oo sheegay in Ethiopia ay wado “olole nidaamsan oo ah isir sifayn gobolka Tigray
Next articleCumar Cabdirashiid oo ka Dayriyay xaalada dalka iyo farmaajo meesha uu geeyay.
Mohamed Abdullahi Mohamed - January 18, 2021 0
Sida ay sheegayaan warar la helayo oo ku dhow dhow Madaxtooyada ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ogolaatay in wax laga bedelo xubnaha guddiga...
Askar lagu laayey Xuduuda u dhexeysa Dalalka Al Jeeriya iyo Tunisia.
Wasaaradda waxbarashada, iyo hey’adda CARE oo kala saxiixday mashruuca wax Bar...
Qaramada Midoobay oo dalbatay in la xaqiijiyo nolosha Amiiradda Dubai
UK oo taageertay go’aanka Golaha Midowga Afrika ku diiday...
Ergeyga Gaarka UNHCR u qaabilsan Geeska Africa oo ...
Xasuustii waayahay iyo 1991to 2021